Khudbad-Sannadeedka Madaxweynaha Somaliland ka jeediyey Golaha Baarlamaanka oo dhammaystiran (Akhriso+sawirro)) | Somaliland Post
Home News Khudbad-Sannadeedka Madaxweynaha Somaliland ka jeediyey Golaha Baarlamaanka oo dhammaystiran (Akhriso+sawirro))
Hargeysa (SLpost)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta khudbad-sannadeedkiisa dastuuriga ah ka jeediyey fadhi wada-jir ah oo ay isugu yimaaddeen Goleyaasha Guurtida iyo Wakiillada oo Baarlamaanka Somaliland ka kooban yahay.
Md Muuse Biixi Cabdi waxa uu khudbaddiisa kaga hadlay arrimo ku saabsan Doorashooyinka, Dhaqaalaha, Siyaasadda Arrimaha Dibadda, Nabadgelyada, Aafada Xannuunka Covid-19, wax-qabadka xukuumaddiisu ku tallaabsatay sannadkii u dambeeyey iyo qodobbo kale.
Fadhiga wada-jirka ah ee Baarlamaanka Somaliland oo uu shir-guddoominayey Guddoomiyaha Golaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo uu weheliyo guddoomiy ku-xigeenkiisa Siciid Jaamac, waxa goob-joog ka ahaa Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Baashe Maxamed Faarax oo uu weheliyo Guddoomiye ku-xigeenkiisa Axmed-yaasiin Sheekh Cali Ayaan iyo Wasiirro ka tirsan Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi.
Haddaba, akhriseyaal waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa khudbadda madaxweyne Biixi ka jeediyey Golaha Baarlamaanka oo dhammsytiran, waxaanay u dhigan tahay sidan:-
“Dhammaantiin, Asalaamku CalaykumWarax-matulaahi, Wabarakaatuh.
Somaliland waxa uu u ahaa sannad nabad-gelyo, sannad aynu gaadhay guulo siyaasiyaasadeed iyo diblomaasiyadeed, oo aynuqaddiyadeena u helnay fagaarayaal caalami ah oo aynu ku soo bandhigno.
Xanuunka COVID-19 oo galaaftay nolosha Malaayin qofCaalamka oo dhan ah;
Walow Xukuumaddu tirada intaa leegoo shaqaale ah ay qaadatay, haddana dadka shaqo la’aantu hayso waxa ay ka noqonaysaa tiro aad u yar.
Qiimaha Shillinka Somaliland waxa lagu ilaaliyay 8,500 halkii Doollar ba, Sicir-bararkuna 5 %ayuu hoos ugu dhacay sannadkii tagay. waana heerkii ugu hooseeyay ee muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan uu gaadho.
Waxa 100% dhammaaday Wajigii Koowaad ee dhismaha Dekedda Berbera oo dhan 400 Mitir, waxaanay Dekeddeenu awood u yeelan doontaa in ay rogto 450 Kunoo Kontayner sannadkii, halka ay hadda ka rogi karto 150 Kun oo Kontayner Taas oo ka dhigan in 67% la kordhiyey awoodda Dekedda Berbera. Waxaynu beegsanaynaa in casriyeyntaasi u horseedo Dekedda Berbera in ay u adeegto dhammaan Dalalka Gobolka.
Waxa aan ugu bushaaraynayaa Shacabka Somaliland in WaddadiiBurco – Ceerigaabodhawaanla dhammaystiri doono, oo ay hadhsan tahay 32 KM oo kaliya. Waxaana hadda dhammaaday 242 KM.
Dunidda aynu maanta joogno, Nabad-gelyada waxa loo qaybiyaa dhawr qaybood oo waaweyn oo ay ka mid yihiin – Difaaca Nabad-gelyada ku dhisan qori iyo xoogiyoAmniga iyo degenaanshaha Bulshada.
Amniga iyo Degenaanshaha Bulshada waxa ugu horreeya in Bulshadu wax wada yeelato, iskaashato, isna aaminto. Taana waxa tiir-dhexaad u ah hawlaha culus ee ay innoo hayaan Hay’adaha Garsoorka. Waxa hubaal ah in Waaxda GarsoorkutahayXabagta isku haysaShacabka.Sidaa darteed, Waaxda Garsoorku waxay mudnaanta siisay:
Waxa Qasnadda Dawladda lagu soo celiyey lacag dhan 5 Bilyan oo SL. Shillinah oo laga lunsaday Qaranka.
Waxaan u mahad-celinayaaGolahaBaarlamaanka, Axsaabta Qaranka, Komishanka Doorashooyinka, Ciidammada Amniga, Murashixiinta iyo Shacabka Somalilandoo isla qaatay doorasho hal cod iyo hal qof ah, isla markaana ka midaysan in ay doorashadu innoogu qabsoonto, oo innoogu dhammaato si nabad-gelyo buuxda ah. Taasi waxa ay muujinaysaa qaan-gaadhnimada siyaasadeed ee ay Somaliland gaadhay.
Xubnaha Somaliland u dhashay ee hawshaa ku foogan waxaan u sheegayaa in Shuruucdii lagula dhaqmi jiray aad loo adkaynayo,waayo waxa inoo fududaatay in la yidhaahdo waa hebel oo waa nin weynoo dalkiisii kusoo noqdaye halla saamaxo, kii la saamaxay baa noqday oo imika ka taliya meeshii, dee caqli ma aha oo qarannimaday meel kaga dhacay, laakiin sharcigii adkaa ee aad meelmariseen ee ahaa illaa maxkamad la mariyo lama saamixi karo, ayaa lagu dhaqayaa haku talo galaan.
Walaalayaal, Hiraalkaa wanaagsan lagu gaadhi mayo fadhi iyo kala qoqob, balse waxa lagu gaadhayaa Iskaashi, Isku-duubni, midnimo iyo walaalnimo aan sal-guurayn oo shacabkeena oo dhan gacmaha isku qabsado sidii aan u gaadhi lahayn hammigaa iyo hiraalkaa inooga muuqdahirka fog.